Ogaden News Agency (ONA) – Cabdullahi Ethiopia Maxuu kasoo doonay Europe- Ma dilki iyo Dhici Ogadeniya aya ku filnaan waayay
Cabduullahi Ethiopia oo ah ninka wakiilka gumeysiga Ethiopia uga ah sidii loo xasuuqi lahaa shacabka Ogadeniya ayaa safar ku yimid wadamo ay kamid yihiin USA iyo UK hadaba safarka Cabdullahi Ethiopia ayaa dad badan isweydiinayaan soo noqnoqaye ma naqbaa u da’ay. Maxayse tahay u jeedada ka danbeysa inay soo laab laabtaan shaqalaha gumeysiga Ethiopia.
Marka kowaad waxay u imanayaan inay cabsi galiyaan muwadiniinta Ogadeniya ee ku nool qurbaha iyaga oo raadsada dadka ehelkoodu ku jiraan xabsiyada gumeysiga waxayna ku yiraahdaan Hebel waa kusii deynayna haddii aad sirdoon noo noqotid anaka iyaga oo shuruudo ku xidha.
Dhinaca kale waxa ay u adeegayaan gumeysiga Ethiopia oo raadsanaya lacag larabo inlaga aruursado maalqabeenka somaliyeed ee ku nool qurbaha. Ethiopia ayaa oggaatay in somalida kusoo jiidata waxaan maamul goboleedkiina siinayna aqoonsi haddii aad Ethiopia daacad u noqotaan. hadaba iyaga oo taas ka faa ideysanaya ayaa Gumeysiga Ethiopia waxa uu soo wakiisha dad ku hadla luqada Somaliga si somalida Lacag badan looga arruursado. Waxa ay safaaradaha Ethiopia geysteen wakiilo somali ah oo turkubaano ah balse darajo ku magacaaban. Kuwaas oo shaqadoodu tahay in somalida ay soo xero galiyaan lacagna ka aruursadaan.
Dhaca iyo boobka somalida Ogadeniya loo geysanaya Waa ku filnaan weysay gumeysiga Ethiopia waxuuna hadda usoo tafoxeytay sanadihi danbe inuu somali weyn oo dhan maal iyo hanti waxay heystaanba gurtaan.
Jalaiyada Ogadeniya ee UK ayaa maanta soo saartay inay ku daba jirto raadka u adeegayaasha gumeysiga Ethiopia ee dhulki hooyo xasuuq intay kasoo geystaan si nabad ah ku soo gala wadamada sharcigu ka shaqeyo islamarkaasna handadaad loo geysto dad aan waxba galabsan. Jaaliyada Ogadeniya ayaa qortay warqad ay u dirtay saxaafada iyo dowlada wadanka UK.
Jaaliyada Ogadeniya ee South Afrika ayaa sanadkii lasoo dhaafay ka furtay dacwad lagu qaadayo dadka soo geystay xasuqa ee kamidka ah dowlada Ethiopia.
Hoos waxaa kujira Cabdullaahi Ethiopia oo dhuumasho ku joogay London. Shir aad loo qarinayay kaqeyb galay. Kadibna si dhaqso leh uga cararay wadanka UK. isaga oo ka cabsi qaba in dacwadaha ay jaaliyada Ogadeniya waddo lagusoo qabto.